Puntland oo ka hadashay dhaqdhaqaaqyada Somaliland ka waddo Boocame & ciidamadii dhowaan u goostay.
Maamulka degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada maamulka Somaliland maalmihii ugu dambeeyey ka wadeen degmadaasi iyo deegaamada hoosyimada.
Waxa uu uga digey shaqsiyaad ka soo jeeda degmadaasi oo doonaya inay soo geliyaan maamulka Somaliland, wuxuuna sheegay in shacabka Boocame ay yihiin dad reer Puntland aanna aqbali doonin inay hoos tagaan Soomaali-diidka.
soomaliada , la diidey waa ayo, ma keligiin baa somali ah,
Boocame wa dhul Puntland
Dhulbhante wa reer puntland
Boocame waxey kujirta gacante ciidanka Puntland.
Binti. Girl.. dagaaal ma rabto , wexeedu waa shukaansi iyo niiiiko.
Boocame… waa Tuulo ka mid ah Somaliland… Ciidanka Qaranka Somaliland ayaa haysta oo jooga.